Warbixinta cusub ee WTTC si loo kaxeeyo soo kabashada loona wanaajiyo adkeysiga Waaxda Socdaalka & Dalxiiska
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Warbixinta cusub ee WTTC si loo kaxeeyo soo kabashada loona wanaajiyo adkeysiga Waaxda Socdaalka & Dalxiiska
Airlines • Airport • Wararka Ururada • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Wararka Raaxada • News • Dadka • Dib-u-dhiska • jiga • Waajib ah • Sacuudi Carabiya Warka • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Warbixinta cusub ee WTTC si ay u kiciso soo kabashada oo kor loogu qaado adkeysiga waaxda Socdaalka & Dalxiiska.
Golaha Socdaalka iyo Dalxiiska Adduunka waxa ay Wasaaradda Dalxiiska ee Sucuudiga la wadaagayaan warbixin cusub oo muhiim ah oo iftiiminaysa qodobbada ugu muhiimsan ee lagu soo celinayo dhaqdhaqaaqa caalamiga ah, iyo talooyinka lagu kicinayo dib u soo kabashada waaxda Socdaalka & Dalxiiska, iyada oo kor loo qaadayo adkaysigeeda.
Kharashaadka imtixaanka oo sarreeya iyo xannibaadaha socdaalka oo sii socda ayaa caqabad ku ah gelitaanka safarka waxayna abuuraan nidaam aqoonyahan.
Iyada oo keliya 34% dadka adduunka oo dhan si buuxda loo tallaalay, sinnaan la'aanta tallaalku waxay halis ku tahay soo kabashada dhaqaalaha.
Wax ku biirinta qaybta wax-soo-saarka caalamiga ah ayaa hoos uga dhacday ku dhawaad ​​US$ 9.2 tiriliyan 2019, ilaa US$ 4.7 tiriliyan sanadka 2020, taasoo ka dhigan khasaare dhan US$ 4.5 tiriliyan.
The Golaha Socdaalka & Dalxiiska Adduunka (WTTC) iyo Wasaaradda Dalxiiska Sacuudi Carabiya ayaa maanta daah furay warbixin cusub oo muhiim ah oo muujineysa qodobada ugu muhiimsan ee lagu soo celinayo dhaq-dhaqaaqa caalamiga ah, iyo talooyinka lagu kicinayo dib u soo kabashada waaxda Socdaalka & Dalxiiska, iyadoo kor loo qaadayo adkeysigeeda.
Iyada oo masiibada keentay safarka caalamiga ah ku dhawaad ​​gabi ahaanba hakad, sababtuna tahay xiritaanka xuduudaha iyo xayiraadaha safarka ee daran, Safarka & Dalxiiska ayaa soo gaaray in ka badan qeybaha kale 18-kii bilood ee la soo dhaafay.
Kaalintii qaybta ee GDP -ga adduunka ayaa hoos uga dhacday ku dhawaad ​​US $ 9.2 tiriliyan sanadka 2019, ilaa $ 4.7 tiriliyan sanadka 2020, taasoo ka dhigan luminta ku dhawaad ​​US $ 4.5 tiriliyan. Intaa waxaa dheer, sida masiibada u dillaacday wadnaha qaybta, 62 milyan oo shaqo oo safar iyo dalxiis ah ayaa lumay.
Warbixintan cusub ayaa iftiiminaysa WTTCSaadaasha dhaqaalaha ee ugu dambeeyay ee muujinaya soo kabashada waaxdu waxay qarka u saaran tahay inay ka yaraato sidii la filayay sanadkan, oo inta badan lala xiriiriyo xiritaanka xuduudaha ee sii socda iyo caqabadaha ku xiran dhaqdhaqaaqa caalamiga ah.
Wax ku biirinta waaxdu ee GDP waxa la filayaa in ay kor u kacdo boqolkiiba 30.7% sanad kasta sanadka 2021, taas oo ka dhigan kaliya US$ 1.4 tiriliyan koror, iyo heerka soo kabashada hadda, wax ku biirinta Safarka & Dalxiiska ee GDP waxay arki kartaa sanad la mid ah- kororka sanadka ee 31.7% sanadka 2022.
Dhanka kale, shaqooyinka waaxda ayaa lagu wadaa inay sare u kacaan 0.7% kaliya sanadkan, taasoo ka dhigan laba milyan oo shaqo oo kaliya, waxaana ku xiga 18% koror sanadka soo socda.
Isagoo matalaya dhibaatada ugu xun ee waaxda Socdaalka & Dalxiiska, COVID-19 kaliya ma saamayn dhaqaalaha adduunka, laakiin sidoo kale samaqabka iyo hab-nololeedka dadka adduunka oo dhan.
Kahor intaan masiibada bilaabanin inay si ba'an u saameyso qeybta, Safarka & Dalxiisku wuxuu ahaa mid ka mid ah qeybaha ugu waaweyn adduunka, mas'uul ka ahaa mid ka mid ah afartii shaqooyin ee cusub ee laga abuuray adduunka intii u dhexeysay 2015-2019 wuxuuna ahaa furaha ugu muhiimsan horumarinta dhaqan-dhaqaale iyo yareynta saboolnimada, isagoo bixiyay fursadaha haweenka, dadka laga tirada badan yahay, bulshooyinka miyiga, iyo dhalinyarada.
Warbixintan cusub ee kasoo baxday WTTC, Isagoo la kaashanaya Wasaaradda Dalxiiska Sacuudi Carabiya waxay muujinaysaa dhibcooyinka xanuunka kuwaas oo diiradda saaraya caqabada degdega ah ee lagu soo celinayo dhaqdhaqaaqa caalamiga ah, oo lagu qaabeeyey baahida loo qabo in wax laga qabto daciifnimada qaybta lagu muujiyay inta lagu jiro masiibada iyada oo dib loo habeynayo mustaqbalka sii waaraya, loo dhan yahay, iyo adkaysiga.
Warbixintan cusub ee muhiimka ah waxay muujineysaa sida xiritaanka xuduudaha caalamiga ah, hubin la’aanta ay sabab u tahay xeerarka is -beddelaya, qiimaha mamnuuca ah ee baaritaanka, iyo is -weydaarsi la’aanta iyo soo -gelinta tallaalka ee aan sinnayn ayaa caqabad ku noqday soo -kabashada waaxda Socdaalka & Dalxiiska 18 -kii bilood ee la soo dhaafay.
Bishii Juun 2020, dhammaan waddammada ayaa wali lahaa nooc ka mid ah xayiraadaha safarka, iyagoo kaalin muhiim ah ka qaatay hoos u dhaca kharashaadka caalamiga ah 69.4% sanadkaas. Xayiraadahaan, oo mar walba isbedelaya oo jahawareerinaya, waxay sii wadeen inay si weyn u saameeyaan kalsoonida qofka socotada ah si ay u ballansadaan, maadaama aysan jirin waddo cad, ama isku aragti caalami ah, marka la eego shuruudaha imtixaanka, karantiil, iyo heerarka tallaalka.
Sida laga soo xigtay warbixinta, sahamintii ugu dambeysay ee dareenka socdaalka caalamiga ah ee uu daabacay Oliver Wyman ayaa muujineysa kaliya 66% qorshaha in ay u safraan dibadda lixda bilood ee soo socota, wax ka yar 10kiiba hal (9%) ayaa ballan qaaday safar mustaqbalka ah, taas oo muujineysa hubin la'aanta sii socota. go'aan qaadashada qofka socotada ah. Tijaabooyin PCR ah oo qaali ah waxay sii wadaan inay saameyn xun ku yeeshaan socotada, dib u noqoshada horumar kasta oo ka dhigista safarka la heli karo iyo abuurista sinnaan la'aan dheeraad ah.
Julia Simpson, Madaxweynaha & Maamulaha guud WTTC, wuxuu yiri: “Qeybta Socdaalka & Dalxiiska ayaa fure u ah habnololeedyo badan oo wali sii saameynaya ku guul darreysiga in la is waafajiyo lana jaangooyo xeerarka COVID-19 adduunka oo dhan. Ma jirto wax marmarsiiyo ah oo ku saabsan habaynta xeerarka, waddamadu waxay u baahan yihiin inay ku biiraan ciidamada oo is waafajiyaan xeerarka. Dalal badan oo soo koraya ayaa dhaqaalahooda ku tiirsan safarro caalami ah, waxaana laga tagay burbur.
“Sida hadda taagan, kaliya 34% dadka adduunka ayaa si buuxda loo tallaaley, taas oo muujineysa in weli ay jirto sinnaan la’aan baahsan oo tallaalka adduunka oo dhan. Qorshe tallaal oo degdeg ah oo loo siman yahay, oo ay weheliso aqoonsiga is-waydaarsiga caalamiga ah ee dhammaan tallaallada ay oggolaatay WHO, ayaa loo baahan yahay si si badbaado leh dib loogu furo socdaalka caalamiga ah isla markaana si degdeg ah dib loogu bilaabo dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha.
"WTTC waxay aqoonsan tahay muhiimada ay leedahay soo celinta kalsoonida macaamiisha, waxaana sameynay, iyadoo dadweynaha iyo ganacsiga gaarka loo leeyahay ay si wadajir ah u wada shaqeynayaan, oo ah habraacyada Safarka Badbaadada ah ee la iswaafajiyey ee 11 warshadood oo ku yaala qaybta socdaalka iyo dalxiiska. Shaambadayada Safarrada Badbaadada ah ee caalamka laga aqoonsan yahay waxaa qaatay in ka badan 400 oo goobood oo adduunka oo dhan ah."
Mudane Ahmed Al Khateeb, Wasiirka Dalxiiska ee Sucuudiga ayaa yiri: "Warbixintan waxay muujineysaa saameynta COVID-19 uu ku yeeshay safarka caalamiga ah iyo warshadaha dalxiiska - iyo sinnaan la'aanta soo kabashada hadda socota. Waxaan u baahanahay inaan si cad u sheegno: haddii dalxiisku ka soo kabto dhaqaaluhu ma soo kaban doono.
"Waa inaan isu nimaadnaa si aan u taageerno warshadahan muhiimka ah, oo kahor masiibada mas'uul ka ahayd 10% GDP adduunka. Warbixintan, Sacuudi Carabiya waxay ku baaqaysaa in waaxdu ay isugu timaaddo Dib -u -qaabaynta Dalxiiska si loo helo mustaqbal waara, loo dhan yahay oo adkaysi leh. ”
Warbixintu waxay qeexaysaa talooyinka si loo gaaro soo kabasho degdeg ah ee Waaxda Socdaalka & Dalxiiska, maadaama COVID uu noqdo mid faafa.
Diirad saarid ku salaysan isuduwidda caalamiga ah ee dib -u -furidda xuduudaha, xaaladaha tijaabinta caddaaladda ah, iyo digitalisation -ka fududeynta safarka, oo ay weheliso joogtaynta iyo saamaynta bulshada ee udub -dhexaadka waaxda, ayaa soo celin doonta dhaqdhaqaaqa caalamiga ah iyo qaybta Socdaalka & Dalxiiska. Tallaabooyinkani waxay badbaadin doonaan malaayiin shaqooyin ah, waxayna u suurtagelin doontaa bulshooyinka, ganacsiyada, iyo meelaha ay ku tiirsan yihiin waaxda Socdaalka & Dalxiiska, inay si buuxda u soo kabtaan oo ay mar kale barwaaqoobaan.